Izici nokusebenzisa kushaft-kancane isikulufa elihambayo
(1) mpo isikulufa elihambayo
Ijubane ujikelezisa isikulufo we mpo isikulufa elihambayo kunakunoma ongavamile isikulufa elihambayo. Ngaphansi isenzo amandla centrifugal, ngomshikisho ekhiqizwa phakathi impahla kanye nendawo ebiyelwe. Lokhu ukuhlikihla kuvimbela impahla kusukela ligijima kanye ikhaba Kuvunguza futhi anqobe yesisindo impahla bewa phansi, ngaleyo ndlela eqaphela eveza mpo ubuningi material.This umshini nokuhanjiswa lilincane, ukuthuthwa ukuphakama lilincane, isivinini ujikelezisa kuphezulu, ukusetshenziswa kwamandla kuyinto big.It Isiza eveza powdery futhi luyimbudumbudu izinto nge fluidity ezinhle, okuyinto ikakhulukazi esetshenziselwa ephakamisa izinto. Ukuphakama ephakamisa ngokuvamile akukho amamitha angaphezu kuka-8.
(2) ovundlile isikulufa elihambayo
Lapho impahla ku ilungiswe slot machine, ngenxa yesisindo impahla kanye nomphumela walo futhi ukungqubuzana phakathi umshini slot, impahla enqwabelanisa ezansi e umshini akusho uphendukisa ne Helix, bese kuphela ujikelezisa vane Helical eshayelwa phambili, efana hhayi ujikelezisa nut kanye ukujikeleza screw motion Translational, ukufeza injongo eveza umshini material.The ekahle multi-iphuzu yokulayisha athula, futhi kungenziwa exutshwe, enyakaza noma selehlile kanyekanye ngesikhathi eveza. Njengoba ezwela lapho sindisa, kulula plug; Into kwasani ukulahlekelwa, isakhiwo ovundlile isikulufa elihambayo ilula, ukufaka, ukugcina uxazulule.
Ifanele ovundlile noma kancane enalokho kuthambekela iyunifomu okuqhubekayo eveza material okuxekethile, imvelo lokushisa esebenza -20 ~ 40 ℃, izinga lokushisa ukudlulisa impahla - 20 ~ 80 ℃ .its ligijima ngejubane is iphansana eqhathaniswa elihambayo mpo, ikakhulukazi esetshenziselwa ovundlile noma ukudlulisa encane ukuthambekela wempahla, ibanga ezokuthutha ngokuvamile asisikhulu kunenkosi amamitha 70.
(3) isikulufa ipayipi (roller elihambayo) elihambayo
Elihambayo Kuvunguza tube kuyinto eqhubekayo Kuvunguza blade ashiselwe ngaphakathi igobolondo cylindrical, igobolondo cylindrical uzungeza nge ikhaba Kuvunguza ndawonye. Ngenxa amandla centrifugal nokungqubuzana, indaba ungeze uzungeza ne izindlu kuphakanyisiwe, ngendaba engaphansi isinyathelo-gravity kanye nokuphenyisisa slide kanye ebusweni Kuvunguza, ukwenza izinto nge Kuvunguza ipayipi Ukujikeleza ukuze uqaphele impahla ukuze siqhubekele phambili, efana hhayi ligijima kanye ukujikeleza isikulufa nut motion Translational, ukufeza injongo eveza impahla.
Okuphansi energy ukusetshenziswa kanye ongaphakeme yesondlo izindleko; Lapho Udla ekupheleni, kungaba ukuzivumelanisa nezidingo yokudla engalingani, futhi ungakwazi ukuqedela izidingo ezihlukahlukene zobuchwepheshe ezifana eveza, ibangele futhi ukuxuba ngesikhathi time.It efanayo elula ukulayisha bese ethula multi-iphuzu, futhi lingadlulisela izinto nge lokushisa eliphakeme. Ifanele eveza ovundlile ephezulu lokushisa izinto; It has a nezimo okuhle izinto nge izinga lokushisa eliphakeme, impahla ukunikezela engalingani, anti-ukuchotshozwa nezimfuneko anti-ukungcola, kanye inqubo okudinga multi-iphuzu yokulayisha athula. Prakthiza uye wafakazela ukuthi kuyaphumelela e ethutha usimende clinker limestone ezomile, nsimbi phosphate, ilmenite powder, amalahle kanye slag.
Usayizi kuyizinhlayiyana we impahla wanezela itheku ukuphela ngeke kube ngaphezu kwamaminithi 1/4 ububanzi isikulufa. Usayizi kuyizinhlayiyana materials kusukela Lesisemkhatsini okuphakelayo itheku ngeke kube ngaphezu kwamaminithi 30mm. Ukuze uqinisekise uMbhalo asisho ukukhiqiza ukusonteka, izinga lokushisa ukushaja Kumele alawulwe ngaphansi 300 ℃. I nemihuzuko sokudla komkhonto futhi umkhombe kuyingozi kakhulu lapho eveza izinto zokusetshenziswa.
(4) nezimo isikulufa elihambayo
I mandrel isikulufa walo mshini nezimo, ngakho emgqeni eveza zingahlelwa ngokuvumelana ijika isikhala. Ngokwe-Ingxenye ubude evundla mpo (cwilisa elikhulu) izigaba emgqeni isakhiwo, isimiso yayo ukusebenza yakhelwe ngokuvumelana abavamile isikulufa elihambayo noma mpo isikulufa elihambayo.
Ukuze ukudluliswa line kufanele ezinqumela ahlelwe ngokuvumelana ijika isikhala ukugwema isimo sokudluliswa kwezinto; Lapho impahla eningi kakhulu noma impahla kanzima Ufakwa igobolondo umshini, le Kuvunguza ngeke ukuntanta ngokukhululekile ngaphandle blocking.The umsindo kuyinto small.It is ikakhulukazi esetshenziselwa eveza evundla mpo materials ngesikhathi esifanayo. Ijubane Ukujikeleza ngokuvamile kudingeka ukuba ephakeme kunaleyo 1000r / imiz e ukudluliswa mpo.
isikhathi Iposi: Aug-15-2018